Astaanta Shirkadda - YTO POWER
YTO POWER waa hormuud ka soo saarta mashiinka naaftada ee Shiinaha waana qeyb hoosaad ka ah Shiinaha YTO Group
YTO POWER, waxaan leenahay Xarun Farsamo oo noo gaar ah (Xarunta Farsamada Qaranka) oo loogu talagalay baarista matoorada naaftada ah, waxaana xiriir dhow la leenahay xarumaha cilmi baarista caanka ah sida AVL ee Austria, Jarmalka FEV ee Jarmalka, YAMAHA ee Japan iyo Machadka Cilmi-baarista Southwest ee Mareykanka. Daraasaddeena iyo awoodaheena kobcinta, oo ay weheliso shaqada adag ee shaqaalaheena khibrada badan leh, waxay awood u siinayaan inaan sii wadno hormarinta matoorada noolaha.
YTO POWER, waxaan ku sameyneynaa alaabadayada si waafaqsan heerarka caalamiga ah. Waxaan nahay ISO9000, ISO14000 iyo TS-16949 oo la sharciyeeyay, iyo matoorrada naaftada ah, waxaa shahaadada ka haysta US EPA, European Emark iyo CE shahaadada. Maanta, alaabadayada waxaa si aad ah u doonaya macaamiisha macaamiisha adduunka oo dhan.
Waxaan hadda haysannaa laba saldhig oo wax soo saar matoorka mashiinka naaftada ah, midna waxay ku leedahay magaalada Taizhou, ee gobolka Jiangsu, soosaarida YD (YANGDONG) taxane saddex-dhululubo ah iyo matoor afar-dhululubo leh oo leh 10kw ilaa 100kw, kan kalena ku yaal Magaalada Luoyang, ee Gobolka Henan, soo saarida LR iyo YM taxane afar-dhululubo ah iyo matoor lix-dhululubo ah oo naaftada ah. Awooda korantada oo 100KW ah ilaa 500kw. Iyada oo loo maro shabakadeena suuqgeynta caalamiga ah, badeecadaha YTO POWER ayaa hadda lagu iibiyaa in kabadan 100 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan.
Anaga oo ah YTO POWER waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno macaamiisha adduunka oo dhan si aan u abuurno mustaqbal wanaagsan! Fadlan la xiriir kooxda wax iibisa wixii macluumaad dheeri ah.